लकडाउनमा पनि जारी छ स्मार्ट कार्ड छपाइ- खुलेपछि कतिले पाउँछन् त कार्ड ? – Nepal Japan
लकडाउनमा पनि जारी छ स्मार्ट कार्ड छपाइ- खुलेपछि कतिले पाउँछन् त कार्ड ?
नेपाल जापान ८ जेष्ठ १९:२३
लामो समयदेखि स्मार्ट लाइसेन्स पाउने प्रतिक्षामा बसेकाहरुमध्ये धेरैले सायद लकडान (बन्दाबन्दी)पछि प्राप्त गर्नेछन् । किनभने यो समयमा पनि ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइ भइरहेको छ र अहिलेसम्म एक लाख ४० हजार अनुमतिपत्र छपाइ भइसकेको छ ।
आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी र सामाजिक दूरी कायम गरेर छपाइ अघि बढाइएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । सरकारले गत चैत ११ गतेबाट बन्दाबन्दी (लकडाउन) लागू गरेपछि १० दिनसम्म छपाइ ठप्प थियो । चैत २० गतेदेखि अहिलेसम्म नियमितरुपमा अनुमतिपत्र छापिरहेको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सामान्य अवस्थामा जति नै छपाइ भइरहेको छ ।”
बन्दाबन्दीको समयमा अहिले ‘मास प्रिन्टर’ बाट छपाइ भइरहेको छ । बन्दाबन्दी पहिले साना क्षमताका प्रिन्टर भने अहिले प्रयोगमा छैन । साना प्रिन्टरले थोरै सङ्ख्यामा छाप्ने तर त्यसको सञ्चालनका लागि थप जनशक्ति चाहिने भएकाले अहिले त्यसलाई प्रयोग नगरिएको विभागले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ को जोखिमबाट बचेर काम गर्नका लागि थोरै जनशक्तिबाट काम भइरहेको महानिर्देशक हमालले बताउनुभयो । दैनिक तीन चरणमा ‘मास प्रिन्टर’ सञ्चालनका लागि दुई/दुईजना कर्मचारी कार्यालय आउने गरेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “एउटा सिफ्टको कर्मचारी गएको एक घण्टापछि मात्रै अर्काे कर्मचारी आउनेगरी मिलाइएको छ ।”